Box Tissue Production Line Series စက်ရုံ - China Box Tissue ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းစီးရီးထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ
OK-220 အမျိုးအစားအပြည့်အဝအော်တိုသေတ္တာတစ်ရှူး Cartoning စက်
OK-100B အမျိုးအစားအပြည့်အ ၀ အော်တိုသေတ္တာတစ်ရှူး Cartoning စက်
အဓိကစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအင်္ဂါရပ်များ ၁။ အလိုအလျောက်အစာကျွေးခြင်း၊ သေတ္တာဖွင့်ခြင်း၊ လက်ဝှေ့ထိုးခြင်း၊ အသုတ်နံပါတ်ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ကော်ဖြန့်ခြင်း၊ ကျစ်လျစ်ပြီးကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ ရိုးရှင်းသောလည်ပတ်မှုနှင့်ညှိနှိုင်းမှု။ 2.Servo motor, touch screen, PLC control system နှင့် man-machine interface display တို့သည်လည်ပတ်မှုပိုမိုရှင်းလင်းပြီးအဆင်ပြေစေသည်။ အလိုအလျောက်မြင့်သောဘွဲ့ဖြင့်စက်သည်အသုံးပြုရလွယ်ကူသည်။ 3. အော်တိုပစ္စည်းများစီစဉ်ခြင်းနှင့်သယ်ဆောင်ယန္တရားမွေးစား ...
OK-400B အမျိုးအစားအပြည့်အဝ - အလိုအလျောက်သေတ္တာတစ်ရှူးချုံ့နိုင်သောအထုပ်အပိုးစက်
အဓိကစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအင်္ဂါရပ်များ ၁။ ဤစက်သည်သေတ္တာတစ်သျှူးကျုံ့ bundling အထုပ်အတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဖြောင့်။ တာရှည်ခံစေရန်သေချာစေရန် Blade တံဆိပ်ခတ်ခြင်းအတွက်မောင်းနှင်သည့်ဒေါင်လိုက်စနစ်။ အစွန်းတံဆိပ်ခတ်ဒီဇိုင်းကိုလက်ခံပါ။ ထုတ်ကုန်၏အရှည်ကိုလွတ်လပ်စွာချိန်ညှိနိုင်ပါသည်။ ကုန်ပစ္စည်း၏အမြင့်နှင့်အညီလတ်ဆတ်သောညှိနိုင်သည့်လိုင်းအမြင့်ကို Model နှင့် Main Technical Parameters Model OK-400B ထုပ်ပိုးမှုနှုန်း (အမှု / မိနစ်) ≤40ပင်မခန္ဓာကိုယ်အကြမ်းမျဉ်းအတိုင်းအတာ (mm) L1850xW1450xH1400 စက်အလေးချိန် (...
အဓိကစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအင်္ဂါရပ်များ ၁။ အလိုအလျောက်ပစ္စည်းကျွေးခြင်း၊ အစာကျွေးခြင်း၊ ကျစ်လျစ်ပြီးကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ ရိုးရှင်းသောလည်ပတ်မှုနှင့်ညှိနှိုင်းမှု။ 2.Servo motor, touch screen, PLC control system နှင့် man-machine interface display တို့သည်လည်ပတ်မှုပိုမိုရှင်းလင်းပြီးအဆင်ပြေစေသည်။ အလိုအလျောက်မြင့်သောဘွဲ့ဖြင့်စက်သည်အသုံးပြုရလွယ်ကူသည်။ 3. အော်တိုပစ္စည်းစီစဉ်ခြင်းနှင့်သယ်ဆောင်ယန္တရား fa ...